China Diamond mbelata agụba, diamond hụrụ agụba, seramiiki tile ịkpụ agụba, marble ọnwụ agụba, konkiri ịcha agụba, hụrụ agụba factory na-emepụta | Boda
Diamond ọnwụ agụba, diamond hụrụ agụba, seramiiki tile ịkpụ agụba, marble ọnwụ agụba, konkiri ịcha agụba, hụrụ agụba
Diamond ọnwụ agụba bụ ụdị ịcha ngwá ọrụ, nke na ọtụtụ-eji na nhazi nke ike na kenkuwa ihe ndị dị ka nkume, ihe, precast slab, ọhụrụ na ochie ụzọ, ceramik na na. The diamond ọnwụ agụba na tumadi ekewet nke akụkụ abụọ: matriks na cutter isi.
Na matriks bụ onye na-akwado akụkụ nke bonded cutter isi, mgbe cutter isi bụ ọnwụ akụkụ na usoro nke iji. Na-egbutu isi ga-iwesa nọgidere na-eji, mgbe matriks agaghị, Ihe mere ndị cutter isi nwere ike ịkpụ bụ n'ihi na ọ nwere diamond. Diamond bụ ihe kachasị sie ike ugbu a, ọ na-egbutu ihe esichara site na esemokwu na isi cutter, a na-ejikwa ọla kọpa ahụ ihe ndị ahụ na-ete diamond.
Manufacturing usoro nke diamond ọnwụ agụba:
1.Sintered diamond ịcha agụba: kewara n'ime oyi na ịpị sintering na-ekpo ọkụ na ịpị sintering.
2. eldgbado ọkụ diamond na-egbu egbu: e nwere ụdị ịgbado ọkụ abụọ: ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ na laser. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ ga-agbado isi na-egbutu ya na mkpụrụ ya ọnụ site na nnukwu usoro a wụrụ awụ, na ịgbado ọkụ laser ga-agbaze ihu kọntaktị nke isi cutter na mkpụrụ ahụ site na ọkụ ọkụ laser dị elu iji mepụta ngwakọta igwe.
3. Electroplated diamond cutting agụba: ntụ ntụ nke ịcha isi na-mmasị na mkpụrụ site electroplating usoro.
Cha mpempe nhazi:
1. Na-aga n'ihu ihu hụrụ nkwọ: a na-ejikarị usoro ntụgharị eme ihe na-aga n'ihu. A na-ejikarị ọla nchara mee ihe dị ka isi ihe matriks. A ghaghị ịgbakwunye mmiri iji hụ na nsonaazụ ọnwụ mgbe ị na-egbutu ya, a ga-egbutu ụdị ọdịiche ahụ site na laser.
2. Agụba ụdị ọnwụ mpempe: hụrụ eze gbajiri, ngwa ngwa ọnwụ ọsọ, adabara akọrọ na mmiri ọnwụ ụzọ.
3. Turbine type cutting agụba: jikọtara ya na uru nke ihe abụọ mbụ ahụ, ezé ahụ na-aga n'ihu na-eweta turbine dị ka concave concave edo, nke na-eme ka ọsọ ọsọ ọsọ ma gbatịkwuo ndụ ọrụ ahụ.
A na - ahọrọ ụdị diamond dị iche iche maka ihe dị iche iche, na ụdị ntụ ntụ dị iche iche dabara adaba maka njirimara nke ihe dị iche iche, nke nwere mmetụta kpọmkwem na ogo, mmetụta, ogo ntozu yana ọbụlagodi na uru nke ngwaahịa.
The ihe na-emetụta arụmọrụ na ndụ nke diamond okirikiri ikwo agụba na-ọnwụ usoro kwa, diamond urughuru size, ịta, nkekọ ekweghị ekwe, wdg Dị ka ọnwụ ike, e nwere linear ọsọ nke hụrụ agụba, ịcha ịta na ndepụta ọsọ.
1. Adabara ịcha terrazzo marble.
2. chapu penti simenti, ihe eji eme ihe ike na ihe ndi n’abụghị.
3. Slotting nke okporo ụzọ, akwa na osimiri.
4. Ihe osise nke uzo uzo na akwa mmiri.
5. A na-ejikarị ya eme ihe na iwu obodo, nwughari okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu, okporo ụzọ okporo ụzọ na ebe ndị ọzọ na-ewu ihe, karịsịa kwesịrị ekwesị maka ịkpụcha paịlị
Na omume, usoro linear nke diamond okirikiri ikiri agụba na-ejedebe site na akụrụngwa ọnọdụ, àgwà nke nkwọ agụba na ihe onwunwe nke nkume a ga-ebipụ. N'ihe banyere ndụ kachasị mma na ịcha arụmọrụ nke mma agụba, a ga-ahọrọ ọsọ ọsọ nke agụba ahụ dabere na njirimara nke nkume dị iche iche. Mgbe ị na-ahụ granite, enwere ike ịhọrọ ọsọ ọsọ nke agụba na 25m ~ 35m / s. N'ihi na konkiri na elu ọdịnaya nke quartz na ike ebipụ, ala ịgba nke hụrụ agụba linear ọsọ adabara. Na mmepụta nke granite ihu brik, dayameta nke diamond okirikiri hụrụ agụba bụ obere na linear ọsọ nwere ike iru 35m / s.
Mpempe akwụkwọ mmịba mmụba 150 mm, mma 40mm diamond gbapụrụ agbaji, 350 mm diamond hụrụ mma, 400 mm mmịcha mma na-egbusi oge niile, 500 mm ihe a na-ahụkarị mma, 600 mm ụcha mgbidi diamond, 700 mm mgbidi hụrụ mma, 800 mm diamond mkpocha mpempe agụba, 900 mm hụrụ mbadamba, 1000 mm diamond hụrụ mma, 1200 mm ihe ngosi mma.
Nri oriri bụ ọsọ ọsọ nke nkume a ga-ebipụ. Ogo ya na-emetụta ọnụọgụ ịwa ahụ, ike dị na mma nkwọ na ikpo ọkụ ọkụ na mpaghara ịwa ahụ. Ekwesịrị ịhọrọ ọnụọgụ ya dịka ọdịdị nke okwute a ga-esi belata. N'ikwu okwu n'ozuzu, igbutu nkume ndị dị nro, dị ka mabul, nwere ike ịmalite ọsọ ọsọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ bụrụ na ọsọ ọsọ dị ntakịrị, ọ na-adaba adaba iji melite ọnụego ọnụọgụ. Ọ bụrụ na ọnụego ndepụta dị oke ala, ọnụ diamond nwere ike ịdị mfe. Otú ọ dị, mgbe sawing konkiri na keadighi rarii ọka Ọdịdị na mkpumkpu ekweghị ekwe, na ndepụta ọsọ ga-ebelata, ma ọ bụghị na hụrụ agụba vibration ga-eme ka diamond fragmentation na belata sawing ọnụego. The ndepụta ọsọ nke sawing konkiri na-adịkarị họrọ ke nso nke 9m ~ 12m / min.
BOSENDA na-enye ụdị ịchacha diski / Diamond Hụrụ Agụba / Diamond Cutting Blade. Isi ya dị nkọ ma na-eguzogide ọgwụ, ndụ ọrụ ya dị ogologo karịa nke ịkụ diski na ahịa izugbe. Anyị na-enye nkọwa zuru ezu nke dị iche iche ịkpụcha diski, na ngwaahịa anyị na-ere na mpaghara niile. Anyị nwekwara ike ịme diski na-abụghị nke ọkọlọtọ dịka ndị ahịa chọrọ.
BOSENDA ịkpụ diski isi akụkụ formulated na elu àgwà ike alloy nke na-eme ka ndị discs ọzọ inogide na ogologo na-arụ ọrụ ndụ.
Nke gara aga: Electric hama, electric draft chisel, SDS, Max, Hex, kapịrị ọnụ chizul, ewepụghị chizel, anọ olulu na ise olulu hexagonal chizulu, pneumatic chizul
Osote: Diamond na-egweri, egweri nkume, marble, egweri granite, egweri nkume
Diamond-egweri, nkume-egweri, mabul, grani ...
Egweri wheel agụba, resin ọnwụ agụba, ste ...